Uyisebenzisa kanjani iWebhu yeWhatsApp kuyo nayiphi na ikhompyuter | I-Androidsis
Ixesha elide ngoku, I-WhatsApp isivumela ukuba sisebenzise usetyenziso ngayo nayiphi na ikhompyuter ngamanyathelo nje ambalwa alula, ngaphandle kwesidingo sokukhuphela inkqubo. Ukuba olu khetho kunokuba luncedo kakhulu kuninzi kwaye yinto edityaniswa zezinye iiapps, ezinje ngeTelegram.
Oku kunokuba yi Usetyenziso lwewebhu, into esele sithethile ngayo kuwe ngaphambili Oku kubhaliwe. Nangona ukuyilahla kwaye sikunike ukusetyenziswa esikufunayo, kuya kufuneka silandele le miyalelo ilandelayo. Zimbalwa kwaye zilula. Masibone!
Uyisebenzisa kanjani iWebhu yeWebhu
Okokuqala, Kufuneka sibenayo ifowuni yethu ukuyiqhagamshela kwi-WhatstApp web interface kunye nokuqhuba inkqubo; ngaphandle kwawo akunakwenzeka.
Emva koko, kufuneka vula usetyenziso olusisixhobo kwaye ufumane, kwikona ephezulu ngasekunene, uphawu lwala machaphaza mathathu ahambelana nkqo. Apho siyinika khona. Siza kuqaphela ukuba imenyu ibonisiwe ngeendlela ezintlanu ezahlukeneyo: Iqela elitsha, Usasazo olutsha, WhatsApp Web, Izithuba ezifakiwe y Useto. Siza kukunika ngokucacileyo WhatsApp Web, Olukhetho lwesithathu.
Emva koko isicelo somfundi weQR siyavela. Kuba jonga ikhowudi yeQR, kufuneka sifikelele kwiphepha lewebhu losetyenziso kwisikhangeli sekhompyuter esi sixhobo.
Nje ukuba iphepha lilayishwe kwikhompyuter, sivavanya ikhowudi ye-QR eboniswe kuyo evela kumfundi wesicelo se-WhatsApp kwifowuni
Nje ukuba konke oku kwenziwe, kufuneka silinde ukuba ikulayishe kwaye yiyo, singancokola, sijonge imeko kunye nokunye.
Kwividiyo engezantsi, iqabane lam UFrancisco Ruiz Ucacisa yonke le nkqubo ilula kwividiyo:
Kwelinye icala, nathi siyachaza uyenza njani i-WhatsApp itye idatha encinci yeselfowuni, Ungawucaphula njani umyalezo ovela kumfowunelwa kuWhatsApp, indlela yenkqubo kuWhatsApp ukuthumela imiyalezo ezenzekelayo y ulakha kanjani iqela kwi-WhatsApp.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyisebenzisa kanjani iWebhu yeWhatsApp kuyo nayiphi na ikhompyuter